९ फागुन, लमही । दाङको बबई गाउँपालिका–६ पञ्चकुलेमा रहेको कुसुम–हापुरे १३२ केभी प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले दाङमा अब विद्युत्को कम भोल्टेजको समस्या नरहने बताउनुभयो । “दाङबाट लो भोल्टेज भयो भनेर पटक–पटक गुनासो आउने गथ्र्यो,” उहाँले भन्नुभयो, […]
९ फागुन, काठमाडौँ । आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेजमा ‘कमाण्ड एण्ड स्टाफ कोर्स सम्पन्न गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । आर्मी कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । विदेशीसहित कूल ६२ विद्यार्थी सहभागिता रहेको उक्त कोर्षमा नेपाली […]
९ फागुन, रुपन्देही । मोफसलको प्रतिष्ठित क्लब मनाङ मस्र्याङ्दीलाई १–० ले पाखा लागाउँदै च्यासल युथ क्लब काठमाडौँ तिलोत्तमा गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुटवलको देवीनगरस्थित एन्फा एकेडेमी टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा आज भएको खेल पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । दोस्रो हाफको शुरुआतमै च्यासलका हेमन्त थापाको पासमा अरमण्डले गरेको गोल नै […]
९ फागुन, काठमाडौँ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदका लागि प्रदेश नं २ को महिला फुटबल टोलीको आज चयन गरिएको छ । रौतहट र पर्साबाट समान सात÷सात, बाराबाट दुई तथा धनुषा र सर्लाहीबाट समान एक÷एक खेलाडी गरी १८ सदस्यीय टोलीको चयन गरिएको छनोट आयोजक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ । छनोट हुनेमा रौतहटबाट सुजिता लामा, […]
९ फागुन, धनगढी । महेन्द्रनगर युनाइटेड यहाँ जारी तेस्रो संस्करणको रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो क्वालिफायर्समा प्रवेश गरेको छ । शरद भेषवाकरको कप्तानीमा रहेको महेन्द्रनगर आज भएको प्रतिस्पर्धामा रुपन्देही च्यालेन्जर्सलाई हराउँदै क्वालिफायर्समा पुगेको हो । महेन्द्रनगरले वसन्त रेग्मीको कप्तानीमा रहेको रुपन्देही च्यालेञ्जर्सलाई एक रनले हराएको हो । अब महेन्द्रनगरले फाइनल प्रवेशका लागि […]
९ फागुन, काठमाडौँ । सरकारले समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्वक र कानून विपरीत कार्यसमेत गरी परिषदलाई हानि पु¥याएको भनी निजहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ । परिषद्मा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी […]
९ फागुन, साँखु । विषादीयुक्त अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने भट्टीमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले छापा मारेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको प्रहरी टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका–६ नागेश्वर गल्लीमा आज छापा मार्दा विषादीयुक्त मदिरा तथा कच्चा पदार्थ बरामद गरेको हो । मदिरा बनाउन राखिएको १५ हजार ६०० लिटर कच्चा पदार्थ र तयारी अवस्थामा […]
परिचयपत्र गैरआवासीय र विदेशीलाई नदिन जोड
९ फागुन, काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई वितरण गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी सांसदले उक्त परिचयपत्र नेपाली नागरिक तथा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य नेपालीलाई मात्र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । […]
९ फागुन, काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ । रमाइलोको लागि त हो नि, त्यो मेरै मान्छे हो […]
९ फागुन, ढाका । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा बुधबार राति भएको आगलागीमा परी कम्तीमा पनि ७० जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ । राजधानी ढाकाको बजार क्षेत्रमा सो आगलागी भएको थियो । राति भएको सो भीषण आगलागीमा परी ७० जनाको ज्यान गएको छ भने अरु दर्जनौँ व्यक्ति जलेर घाइते भएका छन् । जलेर मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला […]
९ फागुन, लहान । लामो समयदेखि अलपत्र छाडेको सप्तरीको कुशाहा–बेल्ही सडकको काम ठेकेदार कम्पनीले पुनः शुरु गरेको छ । राष्ट्रि«य ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त सडकको कामले निरन्तरता पाएको हो । सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा २०७३ साउन १० गते नै सकिएपनि ठेकेदार कम्पनीले काम अलपत्र छाडेर सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राससमा समाचार प्रयोग […]
९ फागुन, गोदावरी । खुला आकाशमा चराझैँ उड्न चाहने साहसिक खेलमा रमाउन उपत्यकावासीले अब बाहिरी जिल्ला धाउनु पर्दैन । हावाको बेगमा रम्दै सुन्दर हरियाली, विभिन्न हिमशृङ्खला र उपत्यका एकैसाथ हेरेर रमाउन महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न पुगेको छ ललितपुरको गोदावरी । उक्त अवसर छोप्दै चलचित्र अभिनेता नाजिर हुसेनले केही दिन अघि गोदावरीमा साहसिक खेल (प्याराग्लाइडिङ) को मजा […]
९ फागुन, हुम्ला । हिमाली जिल्ला हुम्लामा आज फेरि हिमपात शुरू भएको छ । गएको कात्तिक १८ गतेबाट हिमपात हुन शुरू भएको हुम्लामा पुस महीनाको मध्यदेखि फागुनसम्म निरन्तरको हिमपातले यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका एक महीनादेखि नमस्ते टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । जिल्लामा भारी हिमपातले गर्दा नाम्खा गाउँपालिकामा रहेको नमस्ते […]
९ फागुन, टीकापुर । कैलालीका थारू समुदायमा पुर्खादेखि चल्दै आएको बडघर प्रणालीमा सुधार हुन थालेको छ । अचेल बडघरलाई कार्यसमितिमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् थारुबहुल जिल्लाहरु दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका थारू समुदायमा समुदाय परिचालनका लागि हरेक गाउँमा एक जना बडघर, चिराकी, चौकीदार, गुरुवा र केशौका राख्ने परम्परा रहिआएको छ । गाउँको न्याय […]
९ फागुन, गोरखा । गोरखा नगरपालिका–६ सिमलचौरको विस्थापित बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ । भूकम्पपछि जोखिममा परी केरौजाबाट विस्थापित भएर आएका भूकम्पपीडितको बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको हो । उक्त बस्तीका बासिन्दालाई अहिले एक गाग्री पानीका लागि एक घण्टाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सिमलचौरीका कान्छी गुरुङले जानकारी दिनुभयो । “पानीका लागि वरिपरि सार्वजनिक मूल छैन, […]
श्रीपञ्चमी मेला भब्यताका साथ समापन
रासपा नेपालका संयोजक पुलामीद्वारा प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना